IMEX America Smart Muvhuro keynotes inotarisisa chiremba, mutambi uye digita guru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » IMEX America Smart Muvhuro keynotes inotarisisa chiremba, mutambi uye digita guru
Nhau Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo yakazara yemahara chirongwa chekudzidza inomhanya mukati meIMEX America show, kutanga zuva rega rega neMPI keynotes - nhevedzano yekufambisa uye kuzungunusa kubva kunze kwebhizimusi yechiitiko indasitiri uyo mumwe nemumwe achaunza yavo yakasarudzika nyika maonero kune chiitiko.
Kutanga kutaura paIMEX America MPI keynotes ichave mubairo-anokunda muHarvard akadzidziswa chiremba.
Anotevera mumutsara, ndiye uyo anobata musiyano se "vanyori vanonyanya kufarirwa pasi rose."
Pakupedzisira, muvambi wesangano repasi rose rekutamba. Aya ndiwo mutauri wekutaura kuIMEX America muLas Vegas munaNovember.
• Dr. Shimi Kang chiremba anohwina mubairo-akadzidziswa muHarvard, nyanzvi mune zvenhau uye mudzidzisi wezve kukurudzira kwevanhu. Nemakore makumi maviri ezviitiko zvemakiriniki uye nekuferefetwa kwakakura musainzi iri kumashure kwekuvandudza huchenjeri hwevanhu, Shimi akagadzirirwa kupa maturusi anoshanda ekukudziridza hunyanzvi hwezana ramakumi maviri nemakumi maviri emakore ekugona kutsiga, kubatana, kugona, uye nezvimwe.
Munyori anotengesa zvakanyanya Erik Qualman anoongorora "socialnomics" - zvinorehwa nemagariro enhau muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, uye kuti mabhizinesi anogona sei kushandisa simba rawo. Yake yekucheka-kumucheto dhijitari kuraira yakashandiswa nemasangano anosanganisira National Guard neNASA uye zvakatungamira kwaari kuvhoterwa semumwe wevanyori 'vanodikanwa kwazvo munyika'.
• Sekubatanidza pamwe neCEO yesangano repasi rose rekutamba, Radha Agrawal anoziva zvinotora kuvaka nharaunda. Daybreaker, yekutamba yemangwanani uye kufamba kwehutano, inobata zviitiko mumaguta makumi maviri neshanu pasirese nenharaunda yevanoda kusvika hafu yemiriyoni yevanhu uye Radha achagovana maunganidziro aakaita pamwechete irwo rudzi rune simba, runoda kutamba.
Kudzidza kwacho kunotangira pa Smart Muvhuro
Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, ndiyo yekumisikidza pad ye IMEX chirongwa chedzidzo kuIMEX America. Ichitora nzvimbo munaNovember 8, Smart Muvhuro izuva rakazara rekudzidza pamberi pekuratidzwa kuvhura kwaNovember 9 - 11. Chirongwa chakagadzirwazve kuratidza izvo zvichichinja zvevashandi vezviitiko nefemu. tarisa pakuvaka kumashure zvirinani.
Pakati pevatauri pane: Janet Sperstad, weDhipatimendi Director, Chiitiko Management Bhizinesi Solutions paMadison College; Guy Bigwood, Managing Director weGlobal Destination Sustainability Movement uye munyori weIMEX's Regenerative Revolution mushumo; naDavid Allison, muvambi weValuegraphics, hunhu-hunotungamirwa uye hwakajairika nzira yekutengesa.
Pachavewo nezvikamu kubva kuIAEE, EIC uye MPI, pamwe Anoreva Bhizinesi iro rinounganidza vatungamiriri vechikadzi kusimudzira nhaurirano nezve kusiyanisa nekuenzana mubhizimusi rezviitiko zvebhizinesi.
Annette Gregg, SVP weRuzivo paMPI, anoti: "Isu tinofara zvakare kuva mukwikwidzi wezvekudzidzisa weIMEX America, kuronga Smart Muvhuro uye mazwi ezuva nezuva. Isu takaisa pamwe yakasarudzika uye yakakwira kukanganisa kusarudzwa kwemasipika ayo anotarisana nekuvandudza kwega uye kwehunyanzvi. "Tinotarisira imwe IMEX America yakabudirira yenharaunda yedu yezviitiko."
"Chirongwa chedu chekudzidza chagara chiri dombo repakona reIMEX America," anotsanangura Carina Bauer, CEO weImEX Group. “Hazvina kubvira zvapfuura gore rino apo nyanzvi dzezviitiko zvebhizimusi dzinochiva zviwanikwa nekubatana kuti zvifambe nenzira inoshamisa yakasiyana yebhizinesi. Isu tinodada kudyidzana neMPI kuratidza inonakidza nhevedzano yezvinyorwa, vese nyanzvi mundima yavo, vachigovana maonero matsva pamafambiro evanhu kubva pamakona mazhinji. Kutyaira hunhu hunodiwa, sekuziva kwedu, kunogara pamoyo pese pakuronga zviitiko nekuitwa. ”
Mamwezve ruzivo nezve izere Smart Muvhuro chirongwa chichafumurwa munguva pfupi.
kunyoresa ikozvino yakavhurwa IMEX America ichiitika 9 - 11 Mbudzi kuMandalay Bay muLas Vegas ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, musi wa 08 Mbudzi. Kunyoresa - mahara - tinya pano.
Chinangwa chega cheIMEX ndechekubatanidza nekusimudzira indasitiri yemisangano - ichiita zvese zvainogona kudzidzisa, kugadzira, nekubatsira vatori vechikamu kuita hukama hwakasimba nevanhu vakarurama. Nyika ine bhizinesi rakanaka inodarika miganhu nemakungwa, uko vanoronga misangano vanogona kubatana nyore nyore nevashambadzi pasi rese uye nekuvaka hukama hwakasimba hwekushanda - ndicho chiratidzo cheIMEX.
Hunhu hunosimbisa zvese zvinoitwa neIMEX, kubva munzira yainogadzira kuratidzira kwayo kuti ienderane nevatori vechikamu, nenzira iyo inonyatsoongorora zvese zvavari. IMEX inotenda musimba rekuunza vanhu pamwechete kuti vagovane mazano, kutsvaga maturusi matsva, kudzidza hunyanzvi, uye kukurudzira hunyanzvi.
US Capitol complex yakabviswa nekuda kwekutyisidzira kwebhomba